Soo-saaraha Cable-ka Shiinaha
Hoyga > Alaabada > Xarkaha
1. Fiilooyinka tareenka tareenka waxay ku lug leeyihiin isku xirnaanta awoodda korantada, fiilooyinka koontaroolka iyo khadadka la xiriira EMUs. Fiilooyinka heerkulka-kulule-fiiladan waxaa loo adeegsadaa la socodka iyo kormeerka aaladaha korantada, aaladaha korantada, gawaarida, gawaarida iyo meelaha kale sida duulista, aerospace, hubka, maraakiibta, iwm., Oo ku habboon jawiga kala duwan.
2. Kala duwanaanta heerkulka ballaaran, iska caabinta kiimikada ee aadka u fiican, caabbinta saameynta, nolosha kuleylka sare, iska caabinta nukliyeerka, iska caabbinta dharka sare, Miisaanka yar, cabbirka yar, miisaanka fudud, sare, haddii dab kaco, waxay yareyn kartaa waxyeelada dadka waxayna wanaajin kartaa badbaadada gaadiidka. Fiilooyinka fiilooyinka leh ama aan lahayn, kuleylka iyo galka waxaa laga sameeyay waxyaabo ka baxsan halogen. Haddii uu dab kaco, sheygan wax soo saartaa wuxuu xaddidi karaa faafidda ololka, wuxuu yareyn karaa soo saarista gaasaska sunta ah iyo qiiqa, wuxuu yareyn karaa luminta aragga, wuxuuna dadka u suurtagelin karaa inay si deg deg ah uga baxaan.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Xarkaha soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Xarkaha kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.